उपचार कल्याण * संसारमा सबैभन्दा विशेष पुनर्वास
REMEDY लाई कल गर्नुहोस्
म्यानहट्टन: +१ ४२४ ७८१ ३१६६
लन्डन:+४४ २० ४५२५ ०७३७
सिंगापुर:+६५ ३१५८ ६५९६
मार्बेला:+३४ ९५१ १२ ७४ ०७
जुरिच:+४१ ४३ ५०८ ९३ १३
5* लक्जरी वेलनेस रिट्रीट
समग्र विजेता: वर्ष २०२२ को पुनर्स्थापना। हाम्रो असाधारण काम, दीर्घकालीन सफलता दर, विलासी सुविधाहरू र मूल्य मान्यता।
5 *लक्जरी वेलनेस रिट्रीट
उपचार कल्याण भनेको चिन्ता, अवसाद, लत वा बर्नआउटको जीवनबाट मुक्ति मात्र होइन। यो राम्रोसँग जिउने जीवनमा फर्किने कुरा हो।
जहाँ असभ्य विलासिताले चिकित्सीय स्वतन्त्रता भेट्छ। आफूभन्दा ठूलो कुरासँग जोडिने ठाउँ। प्रतिभाशाली, रचनात्मक, बोल्ड र रहस्यमय को लागी एक निजी आश्रय आफैं संग पुन: जडान गर्न को लागी। उत्कृष्ट मानसिक र शारीरिक उपचार को एक ठाउँ।
खुल्ला हृदयका साथ आउनुहोस्, र सदाको लागि छोड्नुहोस्। यो एक उद्देश्य संग रिकभरी हो। अर्थ सहितको गन्तव्य। यो हो उपाय
Remedy Wellbeing को साँच्चै असाधारण र विश्व स्तरीय कार्यक्रममा हाम्रो निजी याट, भाला माछा मार्ने, सास फेर्ने र टाढाको भूमिमा पारिवारिक साहसिक कार्यहरू जस्ता रिकभरी अनुभवहरू समावेश छन्, सबै राजसी 5* विलासितामा भरिएका छन्।
समग्र विजेता: सर्वश्रेष्ठ लक्जरी निजी पुनर्वास २०२२
के तपाई यस्तो बिन्दुमा हुनुहुन्छ जहाँ तपाईलाई थाहा छ तपाईको जीवन परिवर्तन हुनुपर्दछ? के तपाईं थप शान्ति, पूर्ति र उद्देश्यको भावना खोज्दै हुनुहुन्छ? Remedy Wellbeing अवस्थित छ तपाईलाई तपाईको उच्चतम मानहरू अनुसार निर्ममता खोज्न मद्दत गर्न, ती मानहरू जुनसुकै भए पनि। भावनात्मक, शारीरिक र मनोवैज्ञानिक कल्याणको संसारको सबैभन्दा विलासी उपचारहरू प्रदान गर्दै। Remedy Wellbeing ले निर्भरता, चिन्ता, अनिद्रा, अवसाद, बर्नआउट, ट्रमा, तौल व्यवस्थापन, अर्थोमोलेक्युलर पुनर्स्थापना र धुम्रपान त्याग सहित विस्तृत दायराका समस्याहरूलाई समर्थन गर्दछ।
तनाव र बर्नआउट
जीवन समृद्धि कार्यक्रम
कार्यकारी र उद्यमी बर्नआउटले सामान्यतया एक्लोपन, डर, चिन्ता, विक्षिप्तता र डिप्रेसनको जटिल भावनाहरूको रूपमा लामो समयसम्म आत्म-औषधिको परिणाम दिन्छ। कम कार्यसम्पादन, उदासीनता, कमजोर एकाग्रता, आत्म-दोष र सुत्ने विकारहरूसँग जोडिएको भावनात्मक थकान बारम्बार लक्षणहरू हुन्।
खुल्ला दिमागका साथ आइपुग्नुहोस्, र सदाको लागि छोड्नुहोस्। यो उद्देश्यको साथ रिकभरी हो। अर्थ सहितको गन्तव्य। लक्जरी पुनर्वास स्थिति प्रदान गरियो, र उत्कृष्ट परिणामहरूको लागि मान्यता प्राप्त। हामी विश्वास गर्छौं कि लतको विपरीत जडान हो। आफूसँगको सम्बन्ध, अरूसँग, हाम्रो वातावरण र ब्रह्माण्डसँग।
पुरस्कार विजेता विशेषज्ञहरू
REMEDY लाई विश्वको सबैभन्दा प्रगतिशील कार्यक्रमको रूपमा परिकल्पना गरिएको थियो। यसले 12-चरण शासन पछ्याउँदैन। दिगो कल्याण र स्वास्थ्यले एक प्रेरणादायक, व्यक्तिगत रूपमा अनुकूलित उपचार कार्यक्रमको माग गर्दछ जसमा absitinece तोकिएको वा माग गरिएको छैन। उपचारले ग्राहकहरूलाई उनीहरूको आफ्नै मूल्यहरू अनुसार जीवन जिउन मार्गदर्शन गर्दछ।
Remedy Wellbeing एक पुरस्कार विजेता, बेस्पोक व्यक्तिगत एक-एक-एक उपचार प्रदायक हो जुन बर्नआउट, डिप्रेसन, लत, चिन्ता र भावनात्मक स्वास्थ्य चिन्ताहरूको लागि हो। असाधारण आवास र विश्वमा सबैभन्दा उत्कृष्ट निजी स्थानहरूमा बेस्पोक उपचार।
15 वर्ष वैज्ञानिक प्रमाण
हाम्रो अनुकूलन डीएनए परीक्षण व्यक्तिगत आधारमा व्यक्तिगत उपचार निर्धारण गर्न मद्दत गर्छ। हामीले लत, मूड विकार र मनोसामाजिक अवस्थाहरूको संकेतकहरू खोज्ने 69 जीनहरूको प्यानल परीक्षण गर्छौं। हामीले औषधि सहयोगी उपचारलाई व्यक्तिगत बनाउन 300 भन्दा बढी अनुक्रमहरू, 24 न्यूरोट्रान्समिटरहरू, र विभिन्न हार्मोनहरूको विश्लेषण गर्छौं।
हाम्रो समर्पित प्रयोगशाला परीक्षणहरूले एमिनो एसिडको असंतुलन, पोषणको कमी, हाइपोग्लाइसेमिया, सूजन, एड्रेनल थकान, पेटको स्वास्थ्य, हार्मोनल स्तर र न्यूरोट्रान्समिटरहरू जस्ता मुद्दाहरू उजागर गर्दछ। उपचारले सेलुलर स्तरमा मस्तिष्क र शरीरमा भएको क्षतिलाई डिटोक्सिफाई र मर्मत गर्दछ र भविष्यमा हुने रोग र रोगहरू रोक्नको लागि।
लक्जरी + गोपनीयता
'वर्ल्ड्स बेस्ट' स्थिति प्रदान गरियो
REMEDY Wellbding लाई २०२२ मा Worlds Best Rehab द्वारा नम्बर एक दर्जा दिइएको छ र निस्सन्देह विश्वको सबैभन्दा विशेष र विलासी रिट्रीट हो। कार्यक्रममा ग्राहक र उनीहरूको परिवारसँग हाम्रो आफ्नै 2022 फीट याटमा स्वागत गरिएको अनौठो पुनर्मिलन कार्यक्रम समावेश हुन सक्छ जुन निर्जन टापुहरू वरपर जादुई साहसिक कार्यहरूका लागि यात्रा गर्न सकिन्छ।
साइकेडेलिक असिस्टेड थेरापी
चिकित्सा रूपमा पर्यवेक्षित साइलोसिबिन, केटामाइन इन्फ्युसन र इबोगेन उपचारहरू मानसिक स्वास्थ्य उपचारको अग्रपङ्क्तिमा छन् र उपचार प्रतिरोधी अवसाद, CPTSD, चिन्ता र लत विरुद्ध प्रभावकारी साबित भएका छन्। हाम्रो लक्जरी Tripnotherapy™ रिट्रीटहरू चिकित्सकीय रूपमा निर्देशित र चिकित्सा रूपमा व्यवस्थित छन्।
विश्वको सर्वश्रेष्ठ पुनर्वास २०२२ को विजेता
Remedy Wellbeing लाई Worlds Best Rehab Magazine द्वारा नम्बर वन रेट गरिएको छ र निस्सन्देह संसारमा सबैभन्दा सफल, विशेष र विलासी पुनर्वास अनुभव हो। REMEDY त्यो हो जहाँ तपाईंले उत्कृष्ट कर्मचारीहरू, सबैभन्दा अग्रणी-किनारा चिकित्सकीय प्रविधिहरू र पूर्ण पुनर्स्थापनाको मेटामोर्फोसिस मार्फत बिरामीहरूलाई सहयोग गर्न र कुशन गर्न वैज्ञानिक र समग्र दृष्टिकोणहरूको राफ्ट पाउनुहुनेछ।
जनताले के भनिरहेका छन्
"यो अद्भुत क्लिनिकले मेरो जीवन बचायो। कर्मचारीहरू उपभोग पेशेवरहरू हुन् र मलाई थाहा थियो कि म सुरक्षित हातमा छु। म साँच्चै मेरो जीवन परिवर्तनको लागि REMEDY मा सबै टोलीलाई धन्यवाद दिन सक्दिन। कार्यात्मक औषधिले मलाई खानाले कसरी मेरो मुडमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ भनेर बुझ्न मद्दत गर्‍यो। धन्यवाद REMEDY। तपाईंले मेरो जीवन र व्यवसायमा ठूलो प्रभाव पार्नुभयो।"
"उज्ज्वल। अरु के भनूँ । मैले सोचें कि पुनर्वसन अहिलेसम्मकै खराब अनुभवमा गइरहेको छ र म धेरै नर्भस थिएँ। तर REMEDY पूरै फरक छ। अनलाइन कार्यक्रमले मलाई वास्तवमै मद्दत गर्‍यो र मैले मेरो परिवारसँग पूरा दुई हप्ताको उपचार बुक गरें। शब्दहरूले मेरो कृतज्ञताको व्याख्या गर्दैनन्। तपाईंले मलाई मेरो जीवन र मेरो परिवार फिर्ता दिनुभएको छ।”
"मलाई मेरो जीवन फिर्ता दिनुहोस्"
"म आज एक पूर्णतया फरक महिला छोड्छु जसले अब आफूलाई ऐनामा हेर्न सक्छ, र मैले मन पराउन मात्र सुरु गरें तर प्रेम आफैलाई। यो अचम्मको कर्मचारी को लागी तल भएको छ। म कुनै पनि हिसाबले ठाउँलाई दोष दिन सक्दिन। व्यवस्थापनले ग्राहकहरूसँग अन्तरक्रिया गर्नमा मुख्य भूमिका खेल्छ जसले ठूलो फरक पार्छ। म फेरि जीवनको प्रतिक्षामा छु"
"केयरिङ र व्यावसायिक"
"एक दर्ता गरिएको मनोचिकित्सक र लत, खाने विकार, र ट्रमा थेरापी मा विशेषज्ञ को रूपमा, म REMEDY Wellbeing को अत्यधिक सिफारिस गर्न सक्दिन। पेशेवर र योग्य कर्मचारीहरूले ग्राहकहरूको समर्थनमा माथि र बाहिर दिन्छन्। मैले मेरा धेरै ग्राहकहरूलाई REMEDY मा इनपेन्टेन्ट उपचारको लागि रेफर गरेको छु र जारी रहनेछु। "
सेली, हार्ले स्ट्रीट
हाम्रो समाचार, घटनाक्रम र ज्ञान केन्द्र
Remedy Wellbeing वर्तमान सोच र हाम्रो उद्योग नेतृत्व साझा गर्न पाउँदा खुसी छ। हाम्रो टोलीलाई प्रायः "विज्ञ विशेषज्ञहरू" भनेर चिनिन्छ र वर्तमान लत र मानसिक स्वास्थ्य नीति सेट गर्न, अनुकूलन गर्न र परिवर्तन गर्नका लागि सरकारहरू, गैरसरकारी संस्थाहरू, विश्व स्वास्थ्य संगठन र युरोप र विश्वव्यापी अन्य क्लिनिकहरूद्वारा नियमित रूपमा बोलाइन्छ।
हाम्रो लक्जरी ब्रोशर
विश्वको सर्वश्रेष्ठ पुनर्वास 2022 को सम्मानित
विवरण प्राप्त भयो
तपाईंको प्रतिलिपि अनुरोध गर्नुहोस्
प्रतिलिपि अधिकार © 2022 Volania LLC, Inc द्वारा। सर्वाधिकार सुरक्षित।